သြစီတောသားတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သြစီတောသားတွေ
Posted by phone_kyaw on Jul 30, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ဗဟုသုတရတယ် နောက်လဲဆက်ရေးပါအုန်း။ သစ်ကုလားအုပ်တွေကို ပစ်ဖို့ အမဲလိုက်ထွက်ကြတယ် ဆိုတော့ သစ်ကုလားအုပ် တော်တော်ပေါလို့လားဗျ။ အကောင်ကတော့တော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ်နှော်။
( Metal Detector လို့ ခေါ်တဲ့ မိုင်းရှာစက် (သို့ ) ရွှေရှာတဲ့စက် )
( ကျောက်သားတွေကို ဖဲ့ယူပြီး၊ မြေကြီးနဲ့ မီးဖုတ်လိုက်ရင် မြေကြီးက ကော်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီး
ကျောက်ဖဲ့နဲ့ ဓားကို ဖန်တီးလိုက်တော့ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ )
နောက်ပြည့်စုံလာတော့လည်း ကိုယ်စိတ်ပါရာ အခြေချလို့ရပါတယ်။
အင်တာနက်သာ မရှိဘူး ဆိုရင် အတော်လေးငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ ဒေသတခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
တောသူတောင်သားတွေ နားအေးပါးအေး နေတတ်သူတွေဆိုတော့ သူတို့ဘ၀ကို သူတို့ ပျော်နေမှာပါ။
( Ghost Town ) မြို့ပျက်တွေဆိုလို့ ပါ။ သူရဲကားတွေ ရိုက်ပြီဆိုရင် အဲ့လိုမြို့ပျက်တွေကို ရောက်ရောက်သွားတတ်တာမျိုး ကြည့်ဖူးတယ်။
အဲ့ဒီမှာရော သူရဲတွေ ဘာတွေ ခြောက်တဲ့မြို့ပျက်တွေ တကယ်ရှိဖူးလား ကြားဖူးလား မသိဘူး။
ကြမ်းတမ်းတဲ့မြေ ဆန်းပြားတဲ့ကျောက် ပေါးများတဲ့ရွှေ
တော်တို့များ .. ကံကောင်းလိုက်တာနော် ….. ။
သွပ်ပြားတို့ဆီမှာ .. ကြည့်ချင်လျှင်တောင် … ၀င်ကြေးပေးပြီး ကြည့်ရတဲ့ သားပိုက်ကောင်တို့ သစ်ကုလားအုပ်တို့ကို ….သူတို့က အပြင်မှာ အနီးကပ်မြင်ခွင့်တင်မကဘူး … အမဲတောင် ပစ်ခွင့်ရလိုက်သေး .. ဒါတောင် လူမစားပဲ ခွေးကျွေးဖို့တဲ့ ………… ။ သြစီတောသားတွေ တကယ် ကံကောင်းတာပဲ ……. ။
အခုမှ ဘဲ အော်ဇီ အကြောင်း ရေးရေး မြင် မိတယ်။
အော်ဇီ အဝင် အင်မီကရေးရှင်း နဲ့ ကပ်စတန် က အရမ်းတင်းကျပ် တာ အတော်နာမည်ကြီး တယ်။
အဲဒီ Border Security: Australia’s Front Line အကြောင်းတွေကို ရိုက်ပြ ထားတဲ့ nothing to declare လို့ ခေါ်တဲ့ တီဗီ စီးရီး တစ်ခု ကို ကျွန်မ အတော်သဘောကျတာကလား။
တစ်ခြားက ဘာ ဇီဝ သစ်ပင်၊ အကောင် မှ နိုင်ငံ ထဲ အဝင်မခံတာ။
နိုင်ငံတွင်း သဘာဝ အပင်တွေ၊ အကောင်တွေ ကို မြိုသွားမှာ စိုးလို့ တဲ့။
ဆက်စပ်တွေး ကြည့်တော့ ရှင်တို့ အော်ဇီ ခမျာ အတင်းဂရုစိုက် ခံ ရတဲ့ ကလေးငယ်လိုဘဲ။
မြေဆီ မြေနှစ် တွေ က ဆတ်ဆတ်ထိ မခံ ဖြစ်နေသလားလို့။
အညစ်အပတ် ဇီဝ မျိုး လေး တွေ နဲနဲ လို များ နေလား။
ကျွန်မ လဲ ဇီဝဗေဒ ပညာရှင်မဟုတ်လို့ အဲဒီ ပညာကို ဘာမှ မသိပါ။
ယူကေ ကတော့ မိုးမပြတ် လို့ အမြဲ စိုစွတ် နေတာ။
ဗဟုသုတ လေး အတွက် လက်မ ထောင်သွားပါတယ်ရှင်။ :-)
အင်းဗျ အဆိုးထဲကတကယ့်ကို အကောင်း ဖြစ်တဲ့ရသတစ်ခုပါဘဲ။ခုလို ပေးဖတ်လို့ 
လုံးဝ မဟုတ်ဘူး လို့ကြားကနေ ဖင်ဝင်ယားလိုက်တယ် ။
ဦးသန့်မြင့်ဦးစာအုပ်အတိုင်း… အသံထပ်လိုက်ရရင်.. မြန်မာပြည်ကို သိမ်းလိုက်တာ.. အင်္ဂလိပ်ရွိုင်ရယ်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါဘူး..
အင်္ဂလိပ်ပိုင်တဲ့ကုမ်ပဏီတခု(East India Company)က.. အင်္ဂလိပ်ကြေးစားစစ်သားနဲ့.. အိန္ဒိယသားတွေငှားပြီး.. စစ်တိုက်သိမ်းလိုက်တာပါ..
ရပြီးမှ.. အင်္ဂလန်ဘုရင်မကို..” မွေးနေ့လက်ဆောင် ” ဆက်လိုက်တာတဲ့ဗျာ…
ရာဇ၀င်ဆိုတဲ့.. ရာဇ(မင်း)တွေအကြိုက်.. ရေးထားမှတ်တမ်းထားတဲ့.. စာအုပ်တွေနဲ့.. မြှောက်ပင့်ရေးထားတဲ့.. စာအုပ်ထဲကသမိုင်းတွေကို.. အရေခွံနွှာပြီး.. စိစစ်သင့်လှပါတယ်..
သန်ရာ သန်ရာပဲ တွေးမယ်
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ချစ်တယ် မြတ်နိုးတယ်
သံယောဇဉ်ရှိတယ် ဘာညာဘာညာ ပြောပြော ပေါင် ၂ လုံးကြားက အမေဇုံက
မိန်းဖြစ်နေလို့။
မိန်း ကို နှိပ်ချင်လို့ဝင်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ထင်ကြေးပေးတာ ညံ့ဖျင်းသလို..
တောထဲ ဖားငါး ရိုက်စား ရှာစား ကြိုက်သလို စား မငတ်ဘူး ဆိုတဲ့
အတွေးအခေါ်ဟာလည်း သူများ ကားစီးနေချိန် လမ်းလျှောက်ရင်း…..
တသက်လုံး မွေးကတည်းက ဒီ ခြေထောက်နဲ့လျှောက်လာတာလို့ …
တွေးနေတဲ့ ….. ပစ္စည်းမဲ့ မာန လှတောသား တစ်ယောက်လိုပါပဲ ။
ဂွစာဂဏန်းကြီး ဆဲဗမ်းဆဲဗမ်းရဲ့ …. ကော့မန့်အပေါ် ဘုဂလန့်ကိုဘုန်းကျော်က မှတ်ချက်လေးများ ချီးမြင့်မလားဆိုတာ …. စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ….. ခွိခွိ ….. ။
အင်းဂလိပ် သိမ်းခြင်းမသိမ်းခြင်းထက် ကဖုန်းကျော်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းလေးက ပိုမိုက်တယ်လို့ပြောပါရစေဗျာ။ မတူတဲ့ ဘ၀တခု (ကိုယ့်နိုင်ငံထက် အဆပေါင်းများစွားချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံအကြောင်း) ကို ဘာမှမဆိုင်တဲ့နေရာကနေ ထိုင်ဖတ်နေရတော့ ၀တ္တုဖတ်နေရသလို ခံစားရတယ်။ Adventure လေးတွေရှိရင်လဲ ရေးတင်ပါအုံးဗျ။
ကျုပ် သိတာကတော့ စည်သူလွင် ဆိုထားတဲ့ မူရင်းသီချင်း
ghost town ပါပဲ